युगसम्बाद साप्ताहिक - अधिकारको भोक हन्तकारी नै हुँदोरहेछ - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 01.28.2020, 03:58pm (GMT+5.5) Home Contact
आज राज्यका हरेक तहमा बेथितिको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । यसमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कोही पनि छुटेका छैनन् अर्थात् सरकारका अंगहरु सबै बेलगाम छन् । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रादेशिक सभाहरुदेखि गाउँपरिषदसम्म सबै यसमा सम्मिलित छन् । आर्थिक बेथिति बढ्दो क्रममा छ । प्रतिदिन नयाँ नयाँ काण्ड थपिंदै जाँदा पुराना काण्डहरु त्यसै छोपिदै जाँदा रहेछन् कि कुन्नि ! चर्चामै आउन छोड्दा रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको सिंहदरबार त साँच्चै नै आर्थिक बेथितिका कर्मकाण्डका साथ गाउँगाउँमा पुगिसकेछ ।
यहाँ सबै अधिकारका भोकाहरुकै ताँती छ । कर्तव्यको ‘क’ उच्चारण हुन छोडेको छ । जुनसुकै क्षेत्र पनि प्राप्त अधिकारको दुरुपयोगमै व्यस्त देखिन्छ । जताततै गुनासै गुनासा सुनिन्छन् । प्रधानमन्त्री नै सबैभन्दा राम्रो काम मैले नै गरेको छु तर मलाई नै खोट लगाउँछन् भन्नुहुन्छ भने अरुको के कुरा । आखिर गुनासा किन हुन्छन् ? राम्रो काम भए त गुनासो नहुनुपर्ने ? जनचाहना अनुसार काम भएन भनेर जनगुनासा आउनु स्वाभाविक हो, तर प्रधानमन्त्री नै गुनासो गर्न अघि सरेपछि सोध्नैपर्ने भयो– अब जनताले उहाँलाई के गरिदिनुप¥यो ? सारा अधिकार उहाँकै हातमा छ । राष्ट्रपति बनाउने सामथ्र्य समेत उहाँमा छ भने अब के पुगेन ? जनताले अब के थपिदिनुप¥यो ? जनतासित त अब हाडछाला मात्र बाँकी छ ।
जनताले चाहेको नभए पनि प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम त भएकै छ नि । सरकारमा हुनेहरुका चारित्रिक दुर्बलताका कारण जनचाहना अनुसार काम हुन नसकेको यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीजी स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न कुन्नि ? यो वास्तविकतालाई अंगीकार गरेर अघि बढेमा उहाँकै उचाई बढ्ने थियो । भजनमण्डलीको घेराबाट बाहिर निस्केर गृध्रदृष्टि लगाउनुभयो भने देखिनेछ जनता कसरी लुटिएका छन् भन्ने दृश्य । पशुपति शर्माका गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैमा आजको व्यापक भ्रष्टाचार छोपिएला र ? जनताले चाहेको केन्द्रदेखि गाउँतहसम्म व्याप्त चारित्रिक दुर्बलताको उपचार हो । जनताको त्यो मागलाई अर्घेलो भन्न सुहाउला र ?
हरेक कुराको सीमा हुन्छ, तर आजको व्यवहार हेर्दा न अधिकार प्रातिको, न त प्राप्त अधिकारकै दुरुपयोगको सीमा भेटिन्छन् । प्रधानमन्त्रीकै भोक मरेको छैन थप अधिकारको भने अरुको के कुरा ? जति धेरै भए पनि नअघाइने यो कस्तो हन्तकारी अगस्थि रोग रहेछ कुन्नि अधिकारको भोक ? त्यो पनि उपयोग भैदिए त हुन्थ्यो, बढी चाहनाका पछाडिएको इरादा नै दुरुपयोगमा गएर ठोक्किने गरेका उदाहरण यहाँ प्रशस्त छन् ।
कुनै पदमा पुग्दैमा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेखालको अहम रोग फैलिएको छ । जसले आफैंले बाटो देखेको छैन भने उसले अरुलाई बाटो देखाउन सक्दैन । आज राजकाजमा बेथिति बढ्नाको कारण त्यही हो । पदमा पुग्नु ठूलो कुरा होइन, त्यहाँ पुगेर गर्नुपर्ने कामको महत्व बुझेर निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्नु चाहिं ठूलो कुरा हो । जनप्रतिनिधिमा त्यस्तो चेतना जागृत नभएसम्म र ठीक बेठीक के गर्दैछु भन्ने होस नछिरेसम्म पदको मर्यादा बिटुल्याउनु मात्रै हुन्छ । कसले के गर्दैछ भनेर जनताले हेरिरहेका हुन्छन् । आफूले पाएको पद जनताले केही गर्नका लागि दिएका हुन् भन्ने बिर्सन मिल्दैन । त्यो पद स्वार्थपूर्तिका लागि होइन, जनहितका पक्षमा केही गर्नका लागि हो भन्ने सम्झेर काम गरेमा नै सबैको कल्याण छ ।
मान्छे गुणैगुण र दोषैदोषका भएको पनि हुँदैन । मान्छे भनेकै गुण र दोषको पुञ्ज हो, मिश्रण हो । त्यस मिश्रणको मात्रा कसैमा घटी कसैमा बढी हुनसक्छ, फरक यत्ति हो । यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई पनि गुणैगुणको र दोषैदोषको देख्नेहरु पनि होलान । तर त्यो यथार्थ होइन । यथार्थलाई स्वीकार गर्न सके समस्या हलुंगिन्छ, नत्र बल्झिन्छ पनि । अहिले सुल्झिनुसट्टा बल्झिए जस्तो देखिएको छ । यसलाई सच्याएर अघि बढुन सक्नुपर्छ ।